Wonderful Ukrainian TV umethuli Kate Osadchaya! Biography of ubuntu okudala azinake, kuba sobuntwana eqala umsebenzi wakhe kuze kube yilolu suku lalilokhu liqhubekela phambili. Katya kubhekwa ukushayela imfashini kakhulu futhi stylish, kwaphela iminyaka eminingi uqhuba uhlelo "Life okuphezulu", sibonga lolu hlelo Osadchaya eyaduma. Uyazi ibhizinisi kwakhe, ukufunda nokubala okuqinile, ukuthi kahle ababeyizazi fashion uyazi ukuthi angalenza kanjani ikhamera pootkrovennichat abantu edume kakhulu emhlabeni. Sici Its esiwuphawu, ngaphandle ithalente ukuhola izingxoxo ngezindaba ezibucayi, babé izigqoko okungavamile, ngaphandle Katya Osadchaya futhi akunakwenzeka ukuba sicabange ngendlela, zingabantu wakhe ngempela.
Katya Osadchaya: Biography, ebuntwaneni
Katya wazalelwa emndenini ocebile, kuyinto kwenzeka isenzakalo esibalulekile 12 Septhemba, 1983 eKiev. Umama wale ntombazane ku mkhakha yezincwadi, kodwa umkhandlu umndeni Osadchikh kwanqunywa ukuthi kuzoba umqaphindlu - uyinkosikazi. Inhloko yomkhaya, ubaba Katyusha - CEO "Kievpribor".
Katya Osadchaya ebuntwaneni wayevelele phakathi ontanga lesifanele izici ecacile ebusweni nabade, uye wafeza indima ebalulekile ekukhethweni kuka umsebenzi esikhathini esizayo. Njengoba umgomo, intombazane ngosizo abazali baqala ukuba afeze iphupho lakhe - ukuba abe imodeli. Kakade engu-13 ethola iziqu nge-honours wedolobha elikhulu "Bagheera" imodeli esikoleni. Ngaphezu kokutadisha esikoleni ejensi Katya uye wakwenza wahlanganyela umculo nobuciko bokusina. Qala umsebenzi ukumodeliswa kwaba esihle!
Lapho ngineminyaka engu-nane inkanyezi esizayo ithelevishini, ngemva nje kokuphothula ibanga lesikhombisa, waya Tokyo ukudubula. Ngemva kohambo yimpumelelo Katyusha elinde ngokudubula emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Le ntombazane yayingazi ukuthi isikhathi umsebenzi wesikole, okuthwebula ngokuphelele ayewenza njalo ekuphileni a young imodeli isithombe, ngakho-ke abaphumelele ukuhlolwa esikoleni ngaphandle.
Imodeli yebhizinisi asikwazanga nezimfuno intombazane nabafuna izikhundla. Kepha ngosuku lokuzalwa nesishiyagalombili yena wayeqiniseka ukuthi kwakungeke kuqhubeke ukumodeliswa umsebenzi wakhe, kodwa kunalokho iyoba umethuli TV. Lapho ngineminyaka engu-18, Kate wabuyela Kiev futhi ngesikhathi esifanayo washada Olega Polischuka, owayeneminyaka iPhini abantu sika-Ukraine.
Katya Osadchaya, namanje ukuhlawulela ingane, waqala ukuzilungiselela umsebenzi intatheli. Ngemva ebeletha indodana yakhe, umama osemusha waqasha komfundisi ukuze athuthukise ngenkulumo yakhe. Osadchaya okokuqala indima intatheli ezizimele sasibanjelwe First National Channel, emva kwesikhathi esithile kuba intatheli ithelevishini.
Ukuqala isigaba esisha ekuphileni kuhambe kahle, ngo-2005, uCatherine esimisiwe umethuli we "inhlebo", eminyakeni emibili ngemva kwalokho izilaleli zase zikwazi uyibona "Social Life". Ngo-2007, uCatherine wangena uhlu "100 abesifazane ezinethonya kunazo-Ukraine." Ngo-2009, yena zibalwa sesithupha simo "Ubuso Kiev."
"Savor" Katya Osadchaya abe Uhlelo ethandwa kakhulu, okuholela izethameli kwembula izimfihlo elingaphakathi impela osaziwayo Russian angaphandle, futhi ukutshela zonke izimfihlo ngokwabo, abheke ikhamela nekukhuluma ngombhobho. Le phrojekthi inkazimulo noCatherine, it is kokubili ekhaya aphesheya ezaziwayo.
Ukubuka TV umethuli smiling, kubonakala sengathi kungaphumeleli, kodwa nje uya amaqembu, uma iqala ukubukiswa kanye nezethulo, ukubanjwa elikhokhiwe ngayo okwamanje, kanye nomholo. Lo msebenzi futhi ukuphila ungenziwa kuphela umona. Kodwa lena enye kuphela ohlangothini uhlamvu lwemali, eqinisweni, uhlelo ngalunye Osadchaya eside futhi silungiselela ngenkuthalo bagcina izilaleli ewuthanda ulwazi ethakazelisayo futhi wokubuka. Ukuze kumagazini olandelayo kwaba ezithakazelisayo, ekuholeni kufanele hlakanipha wenze umngane abadumile ukususa imaskhi futhi ubonise ubuso kweqiniso. Kuyinto umsebenzi onzima, ngokuvamile kakhulu izinkanyezi sebeqala acasuke ethukuthele intatheli ikuyo yonke indawo, kodwa Kate wayengekho ejwayele ashona, ngakho uhlelo "Life okuphezulu" ithole abayithandayo eziningi.
Katya Osadchaya: uthando ukuphila
Ngo-2001, uCatherine washada MP kusukela "Green Party" U-Oleg Polishchuk. Ngemva konyaka, umndeni yabo agcwaliswa nge Ilya ezincane, kodwa lapho kuzalwa indodana yakhe ayizange ilondolozwe emshadweni. Ngo-2004, lo mbhangqwana buthule futhi ngaphandle scandal abahlukanisile. Polishchuk ayikwazanga eside sikhuthazele yokuthi ngokuyinhloko sabizwa ngokuthi - umyeni Katie Osadchaya.
Ngemva kwesehlukaniso, Kate Osadchaya akazange ugweme ukuxhumana phakathi ubaba nendodana. Famous TV Ilya wasiza kufundiswe Ugogo abakhanukelayo ku nabazukulu bakhe. Umama kakhulu efanayo ngemva kokuzalwa komntwana bekulokhu sakwazi ukuhlala ekhaya izinyanga eziyisithupha, ezindongeni zendlu ngokoqobo becindezelwa Catherine lisebenza kakhulu, kwadingeka sisebenze, wayedinga isikhala, kepha usuyindodana, ongakayeki esilitshelwe futhi njalo ngeminithi khulula obekufanele usichithe naye .
Katya Osadchaya- ubuntu okuthakazelisayo nokuwusizo amaningi, akakaze ihlala namanje futhi njalo ivame ukuba ungakabi yanqoba eziphakeme. Empilweni yakhe ziningi amaqiniso ezithakazelisayo, ezinye zazo phambi kwakho:
1. Kate unesithakazelo ezemidlalo kusukela zisencane, kuyinto babathanda kakhulu ngebhayisikili, kodwa nazo zonke uthando nemisebenzi ezemidlalo, yena ngeke bakwazi ukumelana ukwesaba kwakhe Ukushushuluza.
2. Naphezu mkhakha, okuyinto uphoqa ukuba ube khona imicimbi yezenhlalo kube ezweni osaziwayo, Catherine akawuthandi anomsindo in the amakilabhu.
3. Bonke Osanta - intandokazi izembatho brand Osadchaya.
4. Hhayi ikhamera Kate uyakuthanda ukugqoka ibhulukwe waklebhula futhi ilokwe elide.